Shisheeyaha Oo Dad shacab ah ku dilay duleedka Jannaale. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Shisheeyaha Oo Dad shacab ah ku dilay duleedka Jannaale.
On Jun 9, 2020 323 0
Ciidamada Shisheeyaha Uganda ee duulaanka ku jooga qeybo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan Jannaale ayaa duqeyn xoogan ku garaacay deegaanno kaabiga ku haya Jannaale, halkaas oo ay ku dileen dad shacab ah.
Duqeyntan oo dhacday maalintii shalay ayaa ciidamada Uganda waxay u adeegsadeen madaafiicda cul culus, waxaana ku dhintay ugu yaraan shan qof oo shacab ah.
Xilliga ciidamada Uganda geysanayeen duqeynta majirin wax dagaallo ah oo socday, waxayna Shisheeyuhu u muuqdaan kuwa hubka ku tijaabsanayay dadka Muslimiinta ah ee shacabka ah.
Waxgaradka wilaayaada islaamiga ee Shabeellaha hoose ayaa si kulul kaga hadlay tallaabadan ay ciidamada Shisheeyaha ku dileen shan qof oo shacab ah, waxayna sheegeen iney tani qeyb ka tahay howlaha ay Shisheeyuhu ka wadaan Soomaaliya.
Nabadoon Maxamad Mayow oo ah Afhayeenka Odayaasha dhaqanka ee Shabeellaha Hoose waraysina siiyay idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan ayaa askarta Shisheeyaha ku tilmaamay iney yihiin kuwa arxan laawayaal ah.
Ma ahan markii ugu horeysay oo ciidamada Shisheeyaha ee jooga Shabeellaha Hoose qeybo kamid ah ay duqeymo loo meel dayin ka geystaan tuulooyinka ay ku noolyihiin dadka beeraleyda ah, waxaana arinkaas ka dhashey in dadku ay ka cararaan guryahooda, beerahoodana sidaas ku dayacmaan.
Halkan ka dhagayso Waraysiga Nabadoon Maxamed Mayow-Afhayeenka Odayaasha Shabeellaha Hoose